Maxaa ku soo kordhay muranka arrinta Soomaaliland? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa ku soo kordhay muranka arrinta Soomaaliland?
Waxaa sii xoogeystay muranka u dhaxeeya labada garab ee siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada Waqooyi ee Soomaaliya, waxaana la rumeysan yahay in arrinta hadda ugu adag ee xalka u baahan ay tahay dhexdhexaaadinta labada dhinac.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay Keydmedia Online hore u baahisay, Mid ka mid ah arrimaha ugu adag ee loo baahan yahay in lagu xalliyo shir Madaxeedka ka socda Xarunta Ciidanka Cirka ee Afisyooni, ayaa ah muranka u dhaxeeyay labada garab ee siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada Waqooyi ee Soomaaliya, kaas oo salka ku haya sida loo qeybsanyo xubnaha ay guddiga doorashooinka ku yeelanayaan.
Labada dhinac ee ay kala hoggaaminayaan, Guddoomiyaha Aqalka sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra’iisul Wasaare Ku-xigeynyga Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Mahad Maxamed Guuleed, oo hambeennadii la soo dhaafay kulamo doceedyo la lahaa qaar ka mid ah Madaxda Maamullada ayaa laga codsay in ay si gooni u dhameeyaan Khillafka, heshiis ay isla oggolyihiinna keenaan, si aysan carqalad ugu noqon wada-hadallada.
Labada garab ayaa kulmay, waxanaa soo baxday waraaq la sheegay in ay ka soo baxday Golaha Siyaasiyiinta Soomaaliland, taas oo lagu xusay in la isla af-gartay Saddaex qodob oo muhiim ah, isla markaaana la isla meel-dhigi waayay hal arrin oo ku saabsan guddiga doorashada, arrimaha laga heshiiyay ayaa lagu sheegay;
In Siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi oo isku duuban ay u madax-bannaanaadaan maamulka doorashadooda.
In Siyaasiyiintu si wadajir ah u dhistaan Guddi Sare oo jiheynaya Maamulka Doorashada Gobollada Waqooyi.
In Doorashada Xildhibaannada lagu qabto Carunta Ciidanka Cirka ee Afisyooni, aminagana sugaan Booliska Soomaaliya iyo AMISOM.
Hayeeshee, waxaa waraaqdaan gaashanka u duruuray jiritaankeeda Ra’iisul Wasaare Ku-xigeynyga, Mahad Guuleed, wuxuna ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin, “Warqaddan la wareejinaayo waxba kama jiraan, Waa been aan sal iyo raad toona lahayn”. Ayuu yiri Guuleed.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah garabka Cabdi Xaashi, ayaa dhankiisa xaqiijiyay in waraaqdu tahay mid sax ah oo ka soo baxday Golaha Siyaasiyiinta Soomaaliland, wuxuuna Mahadi Guuleed ku eedeeyay inuu markii shanaad ka baxay heshiisyo la galay.
“Halkan waxaa ku xusan waxii kaso baxay kulamadii aanu wada yelanay siyaasiyiintayada waqooqi oo ka koobna groupka Gudoomiye Cabdi Xashi iyo Khadar. Waxaa nasiib daro ah inu markii 5aad ka baxo DPM ku hishiiyadi la gaadhay waana ayaan daro iyo isbaaro ka socota madaxtooyada”. Ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Intaas kadib RW Rooble, ayaa soo faragaliyay arrinta, wuxuna kulan saacado qaatay la yeeshay Guddoomiyaha Aqalka sare, Cabdi Xaashi, war kooban oo ka soo baxay Xaafiiska Rooble, ayaa lagu shegay in kulankaas uu is-afgarad ku soo dhammaaday loogana hadlayay arrimaha doorashooyinka.